गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता » डाक्टर बन्न काठमाडौँ छिरेका अधिकारी जेठो बैंकको मुटु छाम्दै
मङ्गलबार २७ फाल्गुण, २०७६
रमेश लम्साल, काठमाडौ । सानोमा इच्छा डाक्टर बन्ने थियो । प्रवेशिका परीक्षा उत्र्तीण गरे पनि बाल वयको सपना पूरा गर्न पाटन संयुक्त क्याम्पसमा विज्ञान विषयमा भर्नाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाए । तर जसलाई क्याम्पस भर्ना गरिदिन भनेका थिए, उनले गरिदिएनन् । सात दिन बायोलोजी पढे पनि डाक्टर बन्ने सपनाको त्यस वर्ष पूर्णविराम लाग्यो । “सपनाको खुड्किलो उक्लिने आधार नबनेपछि कमर्स पढ्न म पिपल्स क्याम्पस हान्निएँ । नियतिले नै पर हुत्यादिएजस्तो लाग्यो । अब मेरा लागि अर्को एउटा सपना थियो जुन विपनामै साकार भएर आएको रहेछ । शङ्करदेवबाट विकम (वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक) उत्तीर्ण गरेपछि गाउँकै सेवामा फर्किएँ ।”
नेपालको औद्योगिक घरानाका लागि नेपाल बैंक ‘मदर’ बैंक हो । ५० देखि ६० को दशकमा बैंकलाई राजनीतिक चक्रव्यूहले गाज्यो । अनधिकृत रुपमा ऋण दिइयो । केही राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च पदस्थको योजनामा बैंकको निक्षेपमाथि खेलबाड भयो । जसका कारण बैंक आर्थिकरुपमा समस्यामा प¥यो । प्राकृतिक नियम नै हो, काला रातहरु छिचोलेर सुन्दर बिहान जन्मिन्छ । यस्तै कालो जुग बिताएर नेपाल बैंक यतिखेर सबल बैंकका रुपमा स्थापित भएको छ । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले शेयरधनीलाई २३ वर्षपछि प्रतिफलसमेत दिएको छ । विगतमा बैंकसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकाहरु समेत क्रमशः जोडिन थालेका छन् । सर्वसाधारणहरु पनि सानो विपन्न वर्ग कर्जामार्फत लाभ लिन थालेका छन् । नेपाल सरकारको योजना र केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई पूर्णरुपमा परिपालना गरिएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा छ ।
देशमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । यहाँ हाल २७ वटा त वाणिज्य बैंक नै छन् । नेपाल बैंक किन आउने ग्राहक ? हाम्रो प्रश्न थियो । “नेपाल बैंकसँग कारोवार गर्नु भनेको नेपालको पहिलो बैंकसँग सम्बन्धित छु भन्ने गर्वको महसुस हुन्छ । नेपाल देशसँगको नाम जोडिएको बैंकसँग सम्बद्ध छु भन्ने अनुभव गर्नु पनि हो, यहाँ जुन काम हुन्छ स्वच्छ हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ । प्रणालीअनुसार काम हुन्छ भन्न पाउने गरी ग्राहकमैत्री वातावरण पनि हामीले बनाएका छौँ ।”
कुनै कालखण्डमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर, खराब अवस्थामा पुगेर पुनः रिभाइभ भएको नमीठो इतिहास पनि छ बैंकको । दुःखका शरदकालीन रातहरु मात्रै होइन, वसन्तका न्यायो घाम पनि देखेको छ बैंकले । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले स्प्रेड दर कसिरहेको बेला नेपाल बैंकको ४.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो अन्य बैंकको तुलनामा असाध्यै कम हो । अरू बैंकले जस्तै स्प्रेड ५.५ वा सोभन्दा बढी बनाएको भए नाफा रु एक अर्बमाथि सोझै हुन्थ्यो तर आफूहरुले नाफा मात्रै नहेरेको अधिकारी दाबी गर्नुहुन्छ ।
निक्षेपकर्तालाई पनि बैंकले राम्रै व्याज दिएको छ । बचत खातामा ६ प्रतिशत व्याज पाउने ग्राहकले मुद्धतिमा ९.७५ प्रतिशतसम्म व्याज पाउँछन् । कर्जाको ग्राहक भए न्यूनतम व्याजमा पाएका छन् । “हामी नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी छौँ, सर्वसाधारणप्रति हाम्रो जिम्मेवारी छ । तत्कालका लागि होइन, हामीले दीर्घकाललाई हेरेका छौँ”, अधिकारी बैंकको रणनीति सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, “आम मानिसले सहज र सरल ठान्ने सेवा दिएका कारण पनि ग्राहक नेपाल बैंकमा आउनुहुन्छ । मेरो पूर्ण विश्वास छ ।” बैंकले कमाएको कूल नाफामध्ये ५१ प्रतिशत राज्यलाई जान्छ, ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई जान्छ । राज्यलाई दिएको त घुमीफिरी सर्वसाधारणमा नै आउँछ । विलाशिताका लागि सवारीसाधन खरिद गर्नुप¥यो भने सहजै ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न मान्दैनन्, किन होला ? उहाँको जवाफ छ, “नेपाल बैंकमा यो कुरा लागू हुँदैन । हामीले सवारीसाधन कर्जालाई कडाइ गरेका छौँ । कुनै पोर्टफोलियोमा कम र बढी त हुन्छ नै तर उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा नै हामी बढी केन्द्रित छौँ ।”
उत्पादनमकूलक काम हो भने कर्जा दिने, तर घर जग्गा राखेर, विलाशिताका लागि मात्रै हो भने त्यसमा तयार नहुने रणनीतिमा छ बैंक । अधिकारीको प्रस्ट भनाइ छ “त्यसलाई ‘डिस्करेज’ नै गर्ने हो ।” बैंकको प्रमुख प्राथमिकता कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र साना तथा मझौला कर्जा हुन् । अरू बैंकले जस्तो होडबाजीमा विलाशिताका वस्तुमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ने नीति छ यो बैंकको । “हामी बरु नेपालभरिकै सानो हुन चाहन्छाँै तर आफ्नो लक्ष्यमा प्रतिबद्ध छौँ । हामीले राम्रो गर्दागर्दै पनि अरूले झन् राम्रो गरे भने त्यो त झन् राम्रै भयो नि”, आफ्नो परिवारकै पहिलो बैंकर रहनुभएका अधिकारीले भन्नुभयो, “लक्ष्य त आफूले न तय गर्ने हो, अन्धनक्कल गरेर होडबाजी गर्ने योजनामा बैंक छैन ।”
बैंकका लागि ५० देखि ६० को दशक असाध्यै दुःखद रह्यो । त्यसलाई कालो इतिहासका रुपमा अथ्र्याउँछन् धेरैले । व्यवस्थापनको अदूरदर्शिता, लोभलालच वा दबाब जस्ता कारण भए पनि बैंक समस्यमा परेको थियो । त्यतिबेला डुबेको ऋण उठाउन एगे्रसिभ भएर लागेको छ बैंक । अधिकारीको भनाइ छ, “त्यतिखेरको लगानी हामीले रिकभर गरिसकेको छौँ । केही लगानी अझै बाँकी छ उठाउन ।” कुनै बेला ६० प्रतिशत एनपिए बुक गरेको बैंकको अहिले २.६६ प्रतिशतमात्र छ । धेरै व्यवस्थापन भएको छ । अझै केही त बाँकी नै छ । कुनै ‘रिभाइभ’ गरिएको छ भने केहीलाई ‘रिकभरी’मा पनि लगिएको छ ।